Blog ▷ ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sida loogu xiro Twitch Prime to GTA
January 31, 2022 by Akhristayaasha Shabakada
Iibso kuwa raacsan! Sida loogu xidho Twitch Prime GTA. Haddii aad tahay ciyaaryahan GTA Online ah oo aad sidoo kale leedahay Twitch Prime waxaad si fudud u heli kartaa abaalmarino badan. Haddii aad sii waddo akhrinta hagahan waxaad baran doontaa sida loogu xidho Twitch Prime GTA si aad u hesho qiimo dhimis iyo shay kale. Haddii aad u baahan tahay caawimo waxaad sidoo kale akhrin kartaa Sida loo helo Twitch Prime? … read more
Categories Sidee RRSS
Sida codbixin loogu sameeyo Twitch
Iibso kuwa raacsan! Sida codbixin loogu sameeyo Twitch. Hal dariiqo oo lagula macaamilo isticmaaleyaasha marka aad si toos ah u tabinayso oo aad u hesho ra'yiga dadka kale waa iyada oo loo marayo ra'yi ururin, kuwaas waxaa lagu fulin karaa iyada oo la adeegsanayo amarka chat / doorashada. Maqaalkan waxaan ku sharaxnay wax walba oo ku saabsan sida sahan looga sameeyo gudaha… read more
Sidee si dhakhso ah loogu helaa Facebook?
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 by navigable
Iibso kuwa raacsan! Inaad noqoto qof caan ka ah shabakadaha bulshada waa shay muhiim u ah dad badan, sababtoo ah bini'aadam ahaan, tan iyo markii aan dhalannay waxaa jirta baahi aan la dabooli karin oo loo qabo aqbalaadda bulshada aan ku dhex nool nahay. Waa lagama maarmaan in la sameeyo daraasad adag si loo fahmo qodobkan, laakiin maanta ka hadli mayno… read more
Sidee looga hortagaa dadka inay ogaadaan inaan ku xirnahay Facebook?
Iibso kuwa raacsan! Waxaa jira siyaabo badan oo loo isticmaalo shabakadaha bulshada. Mararka qaarkood waqti ayay qaataan waxayna noqon karaan xoogaa culeys ah. Waxaa ka sii muhiimsan, marka ay u oggolaadaan kuwa kale inay arkaan wax kasta oo ay kuwa kale ku soo kordhiyeen profile-kooda iyada oo aan wax dhib ah la kulmin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhowr siyaabood oo looga fogaado in lagu qanciyo shabakadaha bulshada, tusaale ahaan,… read more
Sidee loo beddelaa email-kayga Facebook-ga?
Iibso kuwa raacsan! Ciwaanka emailka ah ee ku xidhan Facebook waxa uu saamayn ku leeyahay qaar badan oo ka mid ah falalka shabakada bulshada, tusaale ahaan, waxay kuu ogolaanaysaa inaad ogaysiisyada ku hesho iimaylka la yidhi. Nasiib wanaag, Facebook wuxuu kuu oggolaanayaa inaad beddesho cinwaankan wakhti kasta oo aad rabto, si aad u sameyso tan aan dhammaanayn… read more
Sidee loo xannibaa qof Facebook ah?
Iibso kuwa raacsan! Facebook waxa uu leeyahay doorashooyin kala duwan oo la habayn karo si khibradda adeegga dhexdiisa ay u noqoto tan ugu fiican. Dareenkan, aaladaha bulsheed ee aadka loo isticmaalo ilaa hadda waxay kuu oggolaanayaan inaad u habayso hawlo badan oo gaar ah isticmaalayaashooda. Markaa isticmaale kastaa wuu dooran karaa qalliin oo wuu ka noqon karaa read more
Sidee looga muuqan karaa khadka tooska ah ee Facebook?
Iibso kuwa raacsan! Waxaa jira siyaabo badan oo loo isticmaalo baraha bulshada, kuwaas oo dhammaantood ah mararka qaarkood waqti badan oo waxay noqon karaan xoogaa xad dhaaf ah. Iskusoo wada duuboo, marka ay ogolaadaan dadka kale inay arkaan dhib la'aan wax kasta oo dadka kale ay ku dareen profiles. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhowr siyaabood oo aad isaga ilaalin karto in lagu kaaftoomo… read more
Sidee loo kicin karaa kuwa raacsan Facebook?
Iibso kuwa raacsan! Facebook shaki la'aan waa madal intarneedka ugu caansan ee abid soo mara, si cad waxay leedahay fursado aan dhamaad lahayn oo u oggolaanaya isticmaaleyaasha inay ku raaxaystaan ​​​​wax kasta oo ficil ah midba midka kale. Kuwaas waxaa ka mid ah, maanta "raacayaasha" caanka ah ayaa la iftiimin doonaa, ikhtiyaarka ah in isticmaale kasta ... read more
Sidee loo xaliyaa dhibaatooyinkeyga twitter?
Iibso kuwa raacsan! Xarunta Caawinta Twitter-ka, isticmaaluhu waxa uu xalin karaa mashaakilaadka laxidhiidha akoonkiisa isticmaalaha:Login, Account Supended, Profile la jabsado oo wanaajiyo amaanka Koontadooda goobta. Isticmaaluhu wuxuu xallin karaa dhibaatooyinka arrimaha guud ee isticmaalka: Ogeysiisyada, sawirrada iyo fiidyaha, arrimaha la xiriira Profile-kooda,… read more
Amnigayga koontada miyuu wax u dhimay twitter-ka?
Iibso kuwa raacsan! Isticmaalaha Twitter-ka waxa uu xaqiijin karaa in Ammaanka Akoonkiisa la jabiyay, isagoo eegaya kuwa soo socda: View spontaneous Tweets published by his Account, note Unplanned Direct Messages from his Account. Isticmaaluhu waxa uu fahmaa waxqabadyada lagu fuliyo Koontadiisa: Sida loo raaco, la iskaga ilaaliyo, xannibo, iwm.; Hel ogeysiisyada Twitterka... read more
Sidee loo duubaa baahinta twitter-ka?
Iibso kuwa raacsan! Isticmaalaha Twitter-ku wuxuu haystaa fursad uu ku duubo baahinta tooska ah ee hardware ama Software; Sababtan awgeed, waa inaad raacdaa nidaamkan: Marka hore, aad u qaabaynta codsigaaga ama Hardware. Marka uu codsigiisa galo, Isticmaaluhu wuxuu sii wadaa nidaamka: Dooro Server Gudbinta shakhsi ahaaneed; ka dooro Twitterka… read more
Sidee loo joojiyaa koontadayda bogga twitter-ka?
Iibso kuwa raacsan! Si aad u joojiso akoonkaaga Shabkada, Isticmaalaha Twitter-ka: waxa uu u baahan yahay in uu galo akoonkaaga Periscope, guji astaanta Profile-ka oo ka dooro Settings menu-ka soo baxay, dhagsii Deactivate Account. Kadib markaad gujiso Deactivate Account, sanduuqa wada-hadalka habaysan ayaa ka soo baxaya shaashadda,... read more
Sidee loo soo sheegaa waxyaabo badan oo sir ah oo badan?
Iibso kuwa raacsan! Barta Twitter-ka, haddii isticmaaluhu uu ku arko sawirrada iyo fiidyaha Tweets ee ay u arkaan in loola dhaqmo sida Confidential Content, marka loo eego siyaasadda nuxurka ee warbaahinta badan ee Twitter, waxay leeyihiin waajibaad iyo xuquuq ay ku wargeliyaan Twitter. Si aad uga warbixiso sawirrada iyo fiidyaha Tweets, isticmaaluhu waa inuu: Helaa Tweet-ka… read more
Sidee loo dejiyaa sms-ka barta twitter-ka?
Iibso kuwa raacsan! Isticmaalaha Twitter-ku wuxuu leeyahay ikhtiyaarka ah inuu u habeeyo PIN-ka SMS-ka; Ujeedadaas awgeed, waxaad u baahan tahay inaad raacdo nidaamkan: Marka hore, waa inaad hubisaa in qalabkaaga moobiilka uu ku xiran yahay akoonkaaga Twitter. Marka xigta, isticmaaluhu wuxuu galaa akoonkiisa Twitter-ka ee shabakada wuxuuna ku yaalaa goobaha mobilada; gal... read more
Sida loo ilaaliyo xisaabteyda barta twitter?
Iibso kuwa raacsan! Marka isticmaaluhu uu xaqiijiyo in akoonkiisa Twitter-ka uu waxyeeleeyay ammaankiisa, waxaa la soo jeedinayaa inay qaataan taxaddarrada soo socda si ay u Ilaaliyaan Koontadooda: Iska tuur Tweets-ka aan la rabin ee la daabacay iyadoo amniga la waxyeeleeyay. Sidoo kale, ka baadh PC-gaaga fayraska iyo malware-ka, geli balastarrada amniga nidaamkaaga… read more
Waa maxay astaamaha qarsoon ee Gmail?
Iibso kuwa raacsan! Mararka qaarkood waxaan dareemaynaa inaan saacado badan ku bixino hubinta boostada iyo ka qaybgalka sanduuqa-mailka, tani waxay ku dhacdaa aaladaha kale iyo laga yaabee Gmail. Si kastaba ha ahaatee, Google ayaa u fududaysay isticmaalayaasha si ay uga faa'iidaystaan ​​Gmail-kooda qalab si ay u baabi'iyaan hawlaha soo noqnoqda. Waan ku tusi doonaa, kuwee… read more
Maxay yihiin howlaha Gmail?
Iibso kuwa raacsan! Muddo ka dib Gmail waxa uu sameeyay halabuuro badan, sababahan dartood waanu ku tusi doonaa, maxay yihiin shaqooyinka Gmail? Aragtida wada sheekeysiga: Gmail waxa uu kuu ogolaanayaa inaad aragto dhammaan iimayllada soo galaya iyo kuwa baxaya, kuwaas oo aad ku hubin karto adiga oo dib u hubinaya iimaylkii hore si aad macluumaad u hesho. Haddii ay dhacdo inaadan... read more
Sidee loo habeeya Gmail-kaaga?
Iibso kuwa raacsan! Gmail waa adeeg ka mid ah adeegyada loogu isticmaalka badan yahay caalamka, waana adeeg bilaash ah oo fududeeya in lagala soo xidhiidho aalad kasta. Markaad isticmaalayso iimaylkaga, waxaad haysataa Sida loo shakhsiyeeyo Gmail kaaga? Beddel asalka, farta iyo dulucda Gmail: Si aad asalka u samayso oo aad uga dhigto mid la gaaryeelay… read more
Sidee loo abuuraa koonto Gmail?
Iibso kuwa raacsan! Gmail waa mid ka mid ah aaladaha ugu caansan, fududahay in la dejiyo oo la isticmaalo. Gmailka, waxa ugu wanagsan waa in diiwaan galinta akoonkaaga cusub ay tahay lacag la'aan. Abuuritaanka akoon Gmail waa faa'iido iyo faa'iido u leh isticmaalkaaga, sababtoo ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad noqoto milkiilaha ganacsigaaga, saaxiibka ugu fiican, ... read more
Astaamaha ka dhigaya Gmail mid gaar ah
Iibso kuwa raacsan! Hal-abuurnimada waayahan dambe ee adeegga iimaylka Google-ku lahaa, waa in la dhigo Gmail-ka. Iimeyllada Gmail waa kuwa loogu isticmaalka badan yahay uguna caansan adduunka iyadoo tiro aad u badan ay tahay 600 milyan isticmaale. Maalmahan Gmail wuu sii kordhayaa maalinba maalinta ka dambeysa, waxaana… read more
Sideen ugu guuleysan karaa Pinterest?
Iibso kuwa raacsan! Pinterest hadda waa goob dadka siinaya ogolaansho si ay u muujiyaan waxa ugu wanagsan oo ay ku riyoodaan mashaariicda mustaqbalka ee ay rabaan inay gaadhaan. Waxaas oo dhan, muujinta dulqaadku waa lagama maarmaan, laakiin waxaa ka sii sarreeya, wada-shaqeyn kooxeed oo u shaqeyn doonta si macne ah… read more
Sidee loo sameeyaa cod raadinta YouTube-ka?
Iibso kuwa raacsan! Mareegta YouTube-ka weligeed ka daalin ikhtiraacida iyo siinta waxyaabo cusub mid kasta oo taageerayaashiisa ah. Markan waxa ay ku dartay ikhtiyaarka lagu raadinayo cod si aad u fudud oo degdeg ah. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato mawduuca ha ka bixin maqaalkan soo socda. Si loo baadho… read more
Sideen u tirtiraa ama u joojiyaa xisaabteyda Pinterest?
Iibso kuwa raacsan! Dadka intooda badan waxaa laga yaabaa inay maraan nidaam ay rabaan inay tirtiraan akoontiga Pinterest ama xitaa ay joojiyaan si ay u helaan natiijooyin wanaagsan marka ay timaado natiijooyin wanaagsan. Waxaa laga yaabaa in dad badan ay la yaaban yihiin sababta ay fikrad wanaagsan u noqon lahayd in kor loo qaado deminta xisaabta. Awood u leh inay tirtirto ama damiso… read more
Sidee looga helaa ikhtiyaarka "Fiidiyowyada aan jeclahay" YouTube-ka?
Iibso kuwa raacsan! Barta Youtube-ka waxa ay ku daraysaa ikhtiyaar noo ogolaanaya in aan aragno liiska dhamaystiran ee dhammaan fiidyaha aan "jeclaannay". Si aan u galno liiskan, waa in aan si fudud u gujinaa badhanka "Fiidiyowga aan jeclahay" ee ku yaala menu-ka weyn. Laakiin haddii aanad garanayn sida loo galo doorashadan... read more
Sidee loogu beddelaa koontada ganacsiga shaqsiyeed shirkadda Pinterest?
Iibso kuwa raacsan! Dad badan ayaa go'aansada inay beddelaan akoonkooda Pinterest sababo kala duwan awgeed taas oo maanta ka dhigaysa mid aad u fiican. Si kastaba ha noqotee, iyada oo ay ugu wacan tahay xaaladda noocan oo kale ah, waxaa suurtagal ah in ay bixiyaan nasasho ama jiho cusub fikradahooda suurtagalka ah ee ku saabsan mashaariicda ay maanta hayaan. Inkasta oo ay u muuqato in ay… read more
Sideen ufuri karaa koonto ganacsi Pinterest?
Iibso kuwa raacsan! Waa wax iska caadi ah in dadku ay rabaan inay yeeshaan akoon shakhsi ah oo Pinterest ah si ay macno fiican ugu sameeyaan wax kasta oo ay ku sameynayaan goobta dhexdeeda. Si kale haddii loo dhigo, in la soo qaato fikradaha qurxinta ama sidoo kale in la sameeyo mashruucyadooda shakhsi ahaan loo yaqaan habka isku-xirka. Si kastaba ha ahaatee, shirkadaha waaweyn ... read more
Sidee Pinterest ii anfici kartaa maanta?
Iibso kuwa raacsan! Goobo isgaarsiineed oo kala duwan ayaa hagaajiyay is-dhexgalkooda si ay u siiyaan waxa ugu fiican isticmaalayaasha maalin kasta. Si kastaba ha ahaatee, Pinterest waxay ahayd mid ka mid ah boggaga u horumaray si ay u siiyaan khibrad waara oo daacad ah dhammaan dadka go'aansaday inay galaan. In kasta oo qaar badan aysan aqoon dhammaan waxyaabaha wanaagsan… read more
Sideen kuheli karaa Pinterest anigoon soo dejisan
Iibso kuwa raacsan! Dad badan ayaa aamminsan in Pinterest ay tahay goob adag oo la isticmaalo halka aysan jirin fursad ay ku noqoto mid ka mid ah dadka loogu daawashada badan yahay goobta. Si kastaba ha ahaatee, gudaha qaybta isticmaala internetka, siyaabo kala duwan ayaa loo fulin karaa iyada oo aan waxyeello loo geysan kaydinta qalabka. Si kastaba ha ahaatee,… read more
Abka ugufiican si aad ugahesho macaamiisha YouTube
Iibso kuwa raacsan! Dad aad u badan ayaa baranaya suurtagalnimada in ay abuuraan kanaalkooda YouTube oo ay bilaabaan inay lacag ka helaan goobtan. Haddii ay taasi tahay kiiskaaga, aan kuu sheegno inaad u baahan tahay caawinta macaamiisha. Taasi waa sababta aan maanta ku tusinno qaar ka mid ah beddelka qaar si aad u hesho… read more
Iibso kuwa raacsan! Ma ogtahay in YouTube ay ku darayso hab qarsoodi ah hawlihiisa? Haddii aadan wax fikrad ah ka qabin micnaha aaladan iyo waxa loogu talagalay, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad akhrido maqaalkan soo socda halkaasoo aan ku sharxi doonno waxa YouTube-ka qaab qarsoodi ah ku saabsan yahay iyo sida aan u kicin karno dhowr daqiiqo gudahood. Kani waa … read more
Bogga1 Bogga2 ... Bogga303 Xiga →
© 2022 Followers ▷➡️ • Lagu abuuray GeneratePress
Ciyaartoyda IK4 ·